शारीरिक स्वास्थ्यको लागि फिटनेस आवश्यक -::DainikPatra
शारीरिक स्वास्थ्यको लागि फिटनेस आवश्यक
शारीरिक सुगठनमा व्यक्तिहरुको रुचि बढेसँगै फिटनेस सेन्टर तथा जिम हाउसहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् । जनता तथा युवाहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै बुटवल मा रहेको बुटवल फिटनेसले पनि आफ्नो लगानी थप गरी व्यवस्थित गरेको छ । सोही विषयमा सोही फिटनेस सेन्टरका सञ्चालक बिजेन्द्रमान श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
फिटनेस सेन्टरमा लगानी किन थप्नुभयो ?
हामी यस क्षेत्रमा नै सबैभन्दा पुरानो फिटनेश सेन्टर सञ्चालक हौँ । हामीले आजसम्म आइपुग्दा धेरै युवा खेलाडीहरु उत्पादन गर्न सफल भयौँ । २०६१ सालदेखि निरन्तर रुपमा सेवा दिँदै आएका छौँ । फिटनेशको नवनिर्मित दुईतले भवनमा अत्याधुनिक सामग्रीसहित सेवा शुभारम्भ गरेका हौँ । हामीकहाँ आउने ग्राहकहरुको रुचिकै कारणले गर्दा नै यो परिवर्तन ल्याएका हौँ । यसमा धेरै सुविधाहरु रहेका छन् ।
युवा युवतीको चाप कत्तिको छ ?
हामीकहाँ १७ वर्षदेखि उमेर समूह र ४५ वर्षसम्मका ब्यक्तिहरु आउने गर्नुहुन्छ । महिलाहरुको पनि उपस्थिति राम्रो नै छ । फिटनेशमा हाल विहान बेलुका गरी करीब एक सय बढी युवाहरु नियमित अभ्यास गर्ने गर्दछन् ।
जिममा नयाँ के के छ ?
हट एण्ड कुल नुहाउने सावरको व्यवस्था, कार्डियोहल,एसि र नन एसी जिम हलको व्यवस्था गरेका छौँ । साथै यसमा व्यक्तिगत प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि रहेको छ । योसँगै पुरानो जुम्बा, एरोबिक, ब्याटलरोप, पञ्चिङ्ग ब्याग पनि रहेको छ ।
जिम कस्तो ब्यक्ति जाने ?
जिम जो कोही पनि आउन सक्नुहुन्छ । यसमा कुनै रोकतोक छैन । जिममा आउँदैमा प्रतियोगितामा नै जानु पर्छ भन्ने छैन । शारीरिक ब्यायामका साथै खानपिनको समेत विशेष ध्यान दिँदा निरोगी हुन सकिन्छ । मिलनचोक फाइनान्सबाट भित्र रहेको छ, हाम्रो जिम हाउस हेर्नुहोला ।
दैनिक पत्र संवाददाता /बिहिबार, फाल्गुन ३०, २०७५